Sunday November 25, 2018 - 02:40:42 in Wararka by Super Admin
Sirdoonka Ethiopia ayaa soo gudbiyay faylasha rag Soomaliland ah oo Sirdoonka maamulkii Tigray-da u ahaa jaajuusiin mushaar iyo darajooyin kala duwan ku qornaa. Ceebta ugu weyni waa in dadka liiska ku jira qaar badan ay xilal sare ka hayaan dowladda haatan jirta iyo dowladii ka horeyey. Liiska oo aad u dheer iyo xogtan oo qarsoodi ah aawadeed, waxaan idinla wadaagi doonaa shaqsiyaadka ugu darajada sareeya xagga darajoojinka ay sirdoonka Ethiopia.
1. Maxamuud xaashi cabdi wasiirkii hore madaxtooyada soomaliland.
2. Cali maxamed warancade wasiirkii hore ee arimaha gudaha soomaliland.
3. Maxamed kaahin axmed wasiirka hada ee arimaha gudaha soomaliland.
4. taliye ciidanka soomaliland nuux ismaaciil taani.
5. Ismaaciil aadan cismaan ,ismaaciil yare oo ah wasiirka arimaha gudaha hore.
6. Amb cawil cali ducaale wasiirka arimaha maaliyada.
7. Ahmed dahir Gudoomiyaha jaamacada admas
8. Xildhbaan cali mareexaan ahaa wasiirka hawlaha guud iyo guri geynta.
9. Faysal cali waraabe gudoomiyaha xisbiga ucid.
10. Xuseen kiniyaati ahaa madaxa sirdoonka soomaliland.
11. Axmed xaaji cali cadami wasiirkii hore gaashindhiga soomaliland.
12. Xildhibaan saleebaan cali koore wasiirka biyaha soomaliland .
13. Cabdilaahi habene cabdilaahi dheere ,xoghayihii golaha guurtida ,soomaliland ahaana wasiirka wax barashada.
13. Dr Maxamed Cabdilaahi Cumar, wasiirkii hore ee arimaha dibada
Waxaa jira liis kale oo aan weli la shaacin oo la soo wado.